[Faallo] Yaa la marin-habaabin wacyigelinta bulshada ee Cudurka COVID19. | Somali Health
Home Warar Yaa la marin-habaabin wacyigelinta bulshada ee Cudurka COVID19.
Cudurka COVID19 ayaa horraantii bishii Disember 2019 ka dillaacay magaalada Wuhan, gobolka Hubei ee dalka Shiinaha. Hey’adda caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqday in cudurka COVID19 uu caalamka ku yahay caqabad caafimaad loona baahan yahay in si degdeg ah loo wajaho.
Mid ka mid ah dadaallada lagu xakameenaayo cudurka ayaa ah; Xoojiinta wacyeglinta bulshada. Haddaba, dadaalladaas waxaa ku gadaaman warar been abuur ah, xan iyo marin-habaabbin ku saabsan feyruska cusub iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada. Wararkaas been abuurka ah waxay ka yimidaan Madax, Siyaasiyiin, Wariyeyaal iyo Shirkado ganacsi.
Dr Tedros Adhanom, agaasimaha Hey’adda caafimaadka adduunka asagoo ka hadlaayo Shirka Amniga Munich waxuu yiri, “Lama dagaalameyno cudur faafaya, sidoo kale, waxaa la dagaalamaynaa marin-habaabinta. Wararka been abuurka ah waxuu u faafaya si dhakhso badan ugana sahlan fayraskaan, waana arrin halis badan.’
Haddaba, Si looga hortago wararka been abuurka ah, Hey’adda caafimaadka adduunka waxay daahfurtay barnaamij cusub oo lagula dagaallamaayo macluumaadka khaldan ee ku saabsan cudurka COVID-19, barnaamijkaas oo lagu magacaabo “Shabakadda Macluumaadka WHO ee cudurada safmarka”.
Dhinaca kale, Shirkadaha Facebook, Reddit, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter iyo YouTube ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ku saabsan macluumaad khaldan ee laga baahiyo cudurka COVID19. “Waxaan si dhow uga wada shaqeyneynaa dadaallada ku saabsan cudurka COVID-19. Waxaan caawinaynaa malaayiin dad ah inay ku xirnaadaan dadaalladaas, iyadoo si wadajir ah loola dagaallamayo wararka been abuurka iyo macluumaadka khaldan ee ku saabsan fayraska” – ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ee si wadajir ah u soo saareen.
Soomaaliya: Wararka Been Abuurka ah..
Tan iyo intii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee billowday ollalaha wacyigelinta cudurka COVID19, waxaa jira warar been abuur ah oo barbar socda kuwaaso ka imaanaya Xildhibaano, Wasiiro, Culimo, Siyaasiyiin iyo Wariyeyaal.
Xildhibaan Ahmed Fiqi ayaa sheegay in Soomaaliya leedahay cimilo u dhaxeeya 27 – 33°C (Degree celsius), kuwaas oo ka hor istaagaya in cudurka COVID19 faafo. Qaraalkaan uu soo dhigay baraha bulshada waxuu soo xiganayaa qoraal been abuur ah oo laga sameeyay hey’addda UNICEF, balse xaqiiqda dhabta ah ma ahan taas waayo illaa iyo hadda lama ogga in cimilada iyo heerkulka sare uu ku fido feyruska sababa cudurka COVID-19.
Alle ayaa ku mahadsan noogu deeqay cadceed heerkulkeedu u dhexeeyo maalmahan dunidu welwelsan tahay 27 – 33°C (Degree…
Posted by Ahmed Moallim Fiqi on Saturday, 21 March 2020
Shiikh Cali Wajiis, la-taliyaha dhinaca diinta ee dowladda Soomaaliya ayaa asagoo fadhiya talefishinka qaranka, waxuu yiri “Cudurka COVID19 waa karbaashkii Eebe oo Shiinaha ku dhacay. Sidoo kale, seddex (3) magaallo uu ku fiday waa seddex dagaalka Alle ugu waaweyn’.
Sh Nuur Cali Jaamac oo u soo jawaabay Sh Cali Wajiis arrintii Coronavirus ka ee uu yiri Sh Wajiis Gaalada keliya ayuu ku dhacaa, muslimkana waa u dambi dhaaf.
Posted by Somali Space on Wednesday, 18 March 2020
Warbaahinta Universal TV ayaa soo dhigtay baraha bulshada codeyn ku saabsan in cudurka COVID19 yahay mid jira ayadoo guud ahaan shaki gelisay jiritaanka cudurka gudaha Soomaaliya.
Ma aaminsan tahay in Cudurka Coronavirus uu ka jiro Soomaaliya?, su’ashaas ayey ku soo qortay barta ee ku leedahay facebook.
Sidaas si la mid ah Weriye Cali Aden Mumin, oo ka tirsan warbaahinta Goobjoog ayaa been abuur ku tilmaaamay mid ka mid ah bukaanada laga helay cudura COVID19, asagoo soo xiganayo iscasilada madaxii hore ee Machadka Caafimaadka Qaranka.
In uu yiraahdo Corona Virus ayaa laga helay Soomaaliya iyadoo been ah, si uu uga fogaado ayuu isku casilay!Dr Qaasim…
Posted by Cali Aadan Muumin on Thursday, 26 March 2020
Khatarta macluumaadka khaldan
Faafidda wararka been abuurka ee cudurka COVID19 waxuu sababay waxyeello iyo dhimasho baahsan, Tusaale; Donald Trump, madaxweynaha Mareekan oo shir jaraa’id ku qabtay aqalka-cad ayaa sheegay, in hey’adda Cuntada iyo Daawada Mareekanka ay ansixisay isticmaalka daawada cudurka duumada si loogu daaweeyo bukaannada qaba cudurka COVID19. Muddo kadib, dad badan ayaa ku sumoobay halka qaar kale ey u dhinteen cunista daawadaas. Inkastoo markii dambe madaxda hey’adadaas beenisay, eyna caddeysa in daawadaas wali u baahan tahay tijaabo dheeri ah.
Dalka Nigeria, warar been ah ayaa lagu baahiyay warbaahinta bulshada oo ku saabsan daawada cudurka COVID19 sida; isku-darka tuunta, malabka iyo waxyaabo kaloo badan. Arrintaas waxay sababtay in dad badan ku sumoowaan cuntada, halka isbitaallada dalkas kordheen tirada bukanannada qaba caabuqa ku dhaca caloosha.
Xalka maxuu yahay?
Guul ka gaariidda cudurka COVID19 waxay ku xiran tahay hadba fariinta bulshada gaarto.
Wadamada guul ka gaaray cudurka waxay bulshadooda u gudbiyeen hal (1) fariin, halka kuwa aan ka gaarin ka soo baxayeen fariimo kala duwan. Haddaba, fariimahaas waay ka kala yimaadeen mucaarad iyo muxaafad midba midka kale farta ku fiiqaayo. Sidaas owgeed, Siyaasiyiinta waa in fariin isku mid ah gudbiyeen marka ey timaado ka jawaab-celinta Aafooyinga.
Dhinaca kale, bulshada waxay wararka ka helli karaan warbaahin iyo shaqsiyaad, balse waxaa muhim ah in ay iska hubiyaan aqoonta u leeyihiin cudurka iyo guud ahaan xigashada raadraacyada warbixinta. Sidaas si la mid ah Haddii aad aragtid warar aan faahfaahin lahayn, waxaa muhim ah inaad ka baartid shabakadaha caafimaad sida; hey’adda caafimaadka adduunka (WHO) iyo Xarunta ka hortaga cudurada faafa ee Mareekanka (CDC)
Ugu dambeyn, warbaahinta waxay door muhiim ah ka ciyaaraan bixinta macluumaadka ku saleysan cilmi, taasoo ey kasoo xiganayaan xirfadlayaasha caafimaad ama hey’addaha caafimaadka. Sidaas owgeed, waa in bulshada gaarsiiyaan macluumaad sax ah.
Previous articleBukaankii sedexaad (3) oo qaba cudurka COVID-19 ayaa lagu arkay Soomaaliya.
Next articleWarbixinta waxqabadka Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee Cudurka COVID-19.